ब्लग प्रतिभावान सन्तानका टुहुरी आमाहरू डा. पुण्यसागर मरहट्टा
केहीअघि एउटा नेपालकाे एउटा सञ्चार माध्यममा अस्पतालको प्रतीक्षा कक्षमा अनुहार अर्कोतिर फर्काएर बसेकी एकजना आमाको तस्बिर देखेँ । तस्बिर खिच्नेले अनुमति लिएर खिच्यो, खिचेन ? ती आमाको मन उद्विग्न भएको बुझ्यो, बुझेन ? आमाको फोटोको व्यापार गर्ने पत्रिकाले अब सबै समाप्त भइसकेपछि एकबाजी गएर क्षेमकुशल सोध्यो, सोधेन ? यी प्रश्नले मलाई कुटुकुटु खाइरहेका छन् र यो लेख लेख्न चिमोटिरहेका छन् ।
यो त्यही फोटो हो, त्यही खबर हो र त्यस्तै हल्ला हो जसले मलाई आजभन्दा करिब ३५ वर्षअघि फर्कायो । कुरो ३५ वर्षअघिकै हो । अहिलेजस्तो सूचना र संचारको विकास भएको थिएन । सायद, त्यसैले हल्ला बढी बिक्थ्यो त्यतिखेर । हल्ला खरमा सल्केको आगो झैँ सल्किन्थ्यो । नाै वा दस कक्षामा पढ्थेँ म त्यसबखत । तिनताका मसँग अति धेरै प्रश्न साेधिन्थे - स्कुल बसमा, क्लासमा, टोलमा हरेक पाइलामा । मलाई चिन्ने सबैले सोध्ने प्रश्न भने एउटै थियो - तिम्रो मामालाई त मार््यो रे नि? लास बेपत्ता पार््याे रे नि त ? प्रश्नले कति लखेट्थे भने किशोरवयको मेरो मनमा हरेक यी प्रश्नकर्ताको अघि उभिएर मेरो सान्मामाले आफ्नो स्वभावजन्य आँखा तरिदिए पनि हुन्थ्योजस्तो लाग्थ्यो ।
सानोमामाको नाम उल्लेख नगरीकनै म यो लेख तुर्छु तर मलाई चिन्ने र मलाई उनको भान्जा भन्ने चिन्नेले करिब सवा ६ फुटे काबिल फुटबल खेलाडी र नेपाली फुटबल टिमको ११ वर्ष निरन्तर कप्तान, उम्दा पुलिस अफिसर र नेपाल सरकारले 'राष्ट्रिय प्रतिभा' भनि कदर गरेको त्रिपुरेश्वरे रैथाने उनलाई कसरी बिर्से होलान् र ? ती आमाको फोटो देख्दा मैले तिनै मामाकी आमा, मेरी हजुरआमा र टोलेकी ‘सुब्बिनी बज्यै’लाई सम्झेँ । मारिएको भनेको आफ्नो कान्छो छोरोको स्वर सुन्न 'आमा' कोपुण्डोलको हाम्रो घरमा आउनुहुन्थ्यो । किनभने त्यतिखेरसम्म हाम्रो मामाघरमा टेलिफोनको सुविधा थिएन । शनिबार दिउसो ११ बजेतिर मामाको फोन आउँथ्यो बेलायतबाट, पाँचसात मिनेट कुरो हुन्थ्यो, बस् । आमाले सोधेको सम्झिन्छु - तिमी मेरै छोरा हौ त ? तिमीलाई त मारे भन्छन् नि त ?' उताबाट के जवाफ आउंथ्यो कुन्नि आमाको अनुहार धपक्क बल्थ्यो र लाग्थ्यो आज आमा मीठो निन्द्रा निदाउनु हुनेछ ।
किशोरावस्थामा मैले सुनेको हल्ला पनि हुन त त्यही थियो - कुनै अधिराजकुमारले भूपतीन्द्र मल्लको सालिक बेच्नका लागि उखालेर लैजान चाहन्थ्यो । जिम्मेवार प्रहरी अधिकृत भएका कारण हाम्रा मामाले त्यसो गर्न रोके । बरु आफ्नो प्राण आहुति दिए । कथा त्यसरी त रोमाञ्चक सुनिन्थ्यो, सुनिन्छ तर त्यो निराधार थियो । हाम्रा मामा जिउँदै थिए । मारिएका थिएनन् । भक्तपुरबाट एकाएक इन्टरपोलको तालिमका लागि बेलायत पुगेका थिए । सालिक उखाल्ने किस्सा सही थियो वा गलत हामी परिवारजनलाई थाहा थिएन । भएन सायद माइजुलाईसमेत । प्रत्येक टेलिफोन संवादपछिको क्षणिक सन्तुष्टिपछि आमाको द्विविधाको पुनरावृत्ति त भैहाल्थ्यो । भन्नुहुन्थ्यो - खै? होला त नि, स्वर त उही हो, अनुहार देख्न पाइएको होइन । र, हरेकपल्ट उहाँको अजंगको आत्मविश्वास प्रकट हुन्थ्यो । चिराग घोटेपछि निस्किने हामीले पढेका कमिककाे जिन झैँ र बोल्थ्यो आमाको मुखको बाटो - त्यो बलियो छ, गोली हानेका भए त के बाँचोस् ? झुन्ड्याएका भए त छिनाउँछ र आउँछ घ्यु हालेर मुछेर मासको दाल र भात खान उसैको काँसको थालमा । आमाहरूको त्यस्तो अदम्य विश्वास हुने रहेछ। ती 'तस्बिरकी आमा'लाई पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्छ।
करिब ३० वर्षअघि सन् १९९२ को सेप्टेम्बरको अन्त्य र अक्टुबरको सुरुका दिनको कुरो हो । म आर्किटेक्चर विषयमा स्नातक अध्ययन गर्न भर्खर टुक्रिएको सोभियत संघको युक्रेनको ल्वोव सहर पुगेको थिएँ। त्यसबखत पनि एउटा खबर खरमा आगो सल्किए सरी सल्किएको थियो । त्यहाँ भएका, त्यहाँ रहेका सबै नेपाली विद्यार्थी 'रे' भनेर सुनाउँथे। उनीहरूलाई त्यस हल्लामा एक राष्ट्रिय प्रतिभा गुमेको सतही चिन्ता थियो, मलाई मेरो मामा । सूचना संचारको अवस्था त्यतिखेर उसै पनि कमसल थियो, पूर्वसोभियत गणराज्यहरूमा त अचम्मकाे अस्तव्यस्तता थियो। इमेल, इन्टरनेटजस्ता तात्कालिक पराभौतिक आविष्कारका कल्पना त मैले भैरव अर्यालका निबन्धमा मात्र पढेको थिएँ । युक्रेन पुगेको एक महिना नपुग्दै त्यो खबर यति कर्णकटु र मुटु काट्ने थियो कि त्यसको बयान शब्दमा गर्न असम्भव छ। निश्चय नै अरूका लागि एक प्रख्यात व्यक्ति, केहीका लागि ‘रोल मोडेल’, हाम्रा लागि त पारिवारिक खम्बा । त्यही खम्बा ढल्यो भनेको भन्यै छन् , आफुले देख्न पाउनु छैन, सुन्न अप्रियमात्र परेको छ। करिब एक महिनाको अथक प्रयत्न र भाषा जान्ने सिनियरहरुसँग गरिएको अनुनय विनयपछि ल्वोव सहरको केन्द्रीय टेलिफोन कार्यालयबाट कोपुण्डोल फोन गरियो । मैले सोध्नुअघि नै मेरी आमाले भनेको सम्झिन्छु - हो, बाबु ! सान्मामा गयो । त्यसपछि आमाको वक फुटेन, म फोनबाटै मेरी आमाको आँसु छाम्न सक्थे । बुवाले सुनाउनुभयो त्रिपुरेश्वर आमाले भनेका शब्द । आमाले भन्नुभयो रे - ज्वाईं सा'ब, हजुर र सुरेन्द्र ( उहाँको छोरी पट्टिको जेठो नाति) एकबाजी त्यो जहाज खसेको ठाउँमा गएर हेर्दिबक्स्योस् न, त्यति सजिलै मर्दैन सानोबाबु, त्यतै रुखको हाँगातिर अड्किरहेको छ कि ? म बूढी भएँ, त्यो अक्करसम्म पुग्न सक्दिन, नत्र म हजुरलाई कष्ट दिन्नथेँ । त्यसपछि मेरा बुवाको पनि वक बस्यो। त्यसको केही क्षणपछि टेलिफोनको। फोटोकी ती आमालाई पनि त्यसभन्दा बेसी केही भएन कि ?
कहिलेकाहीँ त लाग्छ किन यति बिघ्न जफति कसरी हुन्छन् आमाहरू ? कि अधिकांश मजस्ता पुरुषले सोच्नेजस्तो स्वाँग पारेकामात्र हुन् ? र फेरि सम्हालिन मन लाग्छ र सोच्छु - होइन, यो स्वाँग होइन । किनभने साता, महिना, साल बित्दै बित्दै गएपछि आमा रहुन्जेल आमासँग, जीवनसङ्गिनी रहुन्जेल उनीसँग र नजिकका नातेदारसँग मात्र बाँकी रहन्छन् समाजले चिनेका प्रतिभावान उनीहरू ! हल्लाखोरहरूले सजिलै बिर्सिन्छन् किनभने उनीहरूलाई अर्को चर्को हल्लाले गाँजिसकेको हुन्छ ।
कोपुण्डोलमा हामी हुर्किंदै गर्दा हामीलाई अत्यन्तै माया गर्ने एकजना कार्की थरका दाजु थिए । ‘टुर गाइड’को काम गर्थे। एक दुई वर्ष ती दाजु र उनका भाइहरुसँग मिलेर फागु मनाएको, दसैँमा उनीहरुको छतमा बसेर चंगा उडाएको चर्को याद आउँछ। बिहे गर्ने उमेरका थिए - शंकरदेव क्याम्पसअघि साझा यातायातको नीलो बस मुनि मोटरसाइकलसमेत किचिएर घिसारिएर मरे ०४७- ०४८ सालतिर । कार्की काका त जसोतसो समालिनुभयो धेरै समय लगाएर । काकीको त्यसपछि यस्तो नुर गिर्‍यो कि ती दाजु छँदा घरिको काकीको रूप अहिलेसम्म देख्न पाइएन । हामी जस्ता टोले साथीभाइलाई त बेलाबेलामा सम्झिदिए पुग्यो । जन्म दिने आमालाई भने जीवनभरको रिक्तता ! कति दिक्क लाग्दो हो ? कति झिझ्याट लाग्दो हो ?
अलिअघि एक क्यानेडियन आमाको कथा सुनेको थिएँ । अहिले महाव्याधिको चपेटामा परेका यहाँका ८० काटेका, लामाे समय स्याहार केन्द्रमा बस्ने तिनी आमा प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनैको कथा सुन्ने मौका मिल्यो। द्रवीभूत भएँ। उनी भन्दै थिइन् - एक्ली भएँ म, थुनुवामा छु । बाहिर निस्किन दिँदैनन्। त्यसैले यो भित्ता र त्यहाँ भएका फोटाहरुसँग कुरा गर्छु। स्याहार त गर्छन् तर उनीहरू नै व्यथित छन् , आत्तिएका छन्, डराएका छन् । मैले जीवनमा झन्डै ५० बर्ष नर्सिङ सेवामा बिताएँ । म पर्खालको यता र उता दुवैको हतासा अनुभव गर्न सक्छु । सतासी वर्षकी भएँ भन्दै थिइन् ती आमा । सँगै यो पनि भनिन् - 'आ, केलाई चाहियो मलाई भ्याक्सिन ? गत अप्रिलमा मेरी बहिनीको पनाति जन्मियो । विज्ञानले उसको लागि भ्याक्सिन भनाइदेओस् बरु !' रेडियोकर्मीले सोधिन् - आमा, तपाईंका आफ्ना चाहिँ छैनन् ? आमाले सगर्व भनिन् - अहँ, छैनन्। म कोरिया युद्धमा देशले गुमाएको एक सैनिककी आमा हुँ । लाग्यो, भन्दै थिइन् - ऊ थियो, जीवनमा रौनक थियो, ऊ गयो, जिन्दगी रौरव भयो । एउटा सन्नाटा भयो र बुढीआमा आफैँ सम्हालिएर भनिन् - सुर्ता नलेऊ नानी ! म प्रतिभावान सन्तान मरेकी एक टुहुरी आमा हुँ । रेडियो सुन्दै गाडी हाँकेर भागदौडको जिन्दगी नापिरहेको मैले आँसु थाम्न सकिन। लाग्यो, कति बहादुर हुन्छन् आमाहरू? कसरी खप्न सक्छन् वदना यिनले ?
मैले यहाँ टिपेका कथा हाम्रा साझा जीवनका सहज कथा हुन्। यी नटिपे, नखिपे, नलेखे हामी बाँचिरहेको समयलाई अन्याय हुन्छ र हामीसँगै बाँचीरहेका टुहुरी आमाहरुलाई पनि ! हामीले हिजो सूचना संचारको विकास नहुँदा एक कान दुई कान मैदान गर्दै अनर्गल हल्ला गरेर आमाहरूलाई घोचिरह्यौँ । अचेल त घोच्ने उपकरण छ्याप्छ्याप्ती छन् बजारैभर । क्यामरा छन्, घोचाजस्ता माइक छन्, तिनै तेर्स्यायो । उमेरले नेटो काट्दै गरेकी आमा आफ्ना सन्तानको मायाका कारण अस्पतालको प्रतीक्षा कक्षमा निराहार बसेकी छिन्। उनैको फोटो खिच्यो, बजारमा विक्रीको वस्तु बनायो । उनैको जिउँदो छोरोलाइ मर्नुअघिनै सामाजिक संजालमा मारिदियो र मखलेल सुत्यो । भोलिपल्ट बिहान उठ्यो, उनको छोरो त ज्युँदै रहेछन् भन्ने पत्ता लगाएर हत्तनपत्त तर सुटुक्क आफ्नो ‘स्टेटस’ मेटायो । न कुनै क्षोभ, न कुनै ग्लानि, न त कुनै सार्वजनिक क्षमायाचना । कता जाँदैछ विश्व समाज ?
नजिकबाट भोगेको हुनाले यो पनि लेख्नै पर्छ अन्यथा अधुरो हुन्छ। जतिसुकै ठूलो मान्छे भए पनि राष्ट्रले झन्डा ओढाएर, बिगुल फुकेर अन्तिम बिदाइ गरे पनि आजन्म त्यो प्रतिभाको, त्यो उचाइ र गरिमाको स्मृतिमा हर रात छोरो आउँछ कि भनी बाटो हेर्ने र कहाँ होला भनी गमिने तिनै आमा हुँदिरहिछन् । मेरा खसम आउनेछन्, छोराछोरीलाइ नाना र पापा ल्याइदिनेछन् भन्ने अर्धांगिनी हुँदी रहिछन् । मेरा बाबा ' सुपरहिरो' हो भन्ने छोराछोरी हुँदा रहेछन् । परिवारका नजिकका आफन्तलाई एक खालको रिक्तताबाहेक अरूलाई दुइदिनको रामछायाँ, हदै भए बर्सेनि एक स्मृति सभा, मंच, भाषण, खादा, माला, अबीर, धुप र माला लगाएको एउटा फोटो !
ती गएकाहरू बारे गर्न के सकिन्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । किनभने तिनका नामका प्रतिष्ठान अन्ततोगत्वा नितान्त पारिवारिक चासो बन्दा रहेछन् । तिनका नामका स्मृति ग्रन्थ पुस्तकालयमा थन्किँदा रहेछन् र तिनका सालिक बर्सेनि पुछपाछसमेत परिवारले नै गरिदिनु पर्दोरहेछ । अलि अस्ति कतै पढ्दै थिएँ - ‘गुडबाई बाबा, आई विल मिस यु’ भनिन् रे तेह्र वर्षे छोरीले । मैले भेट्ने मौका पाए भन्ने थिएँ - नानु, तिम्रो बाबा बाँचुन्जेल हाम्रो हुनुभो, अब सधैँ तिम्रो, तिम्री मामुको र तिम्री हजुरआमाको मात्र हुनुहुने भो। अलिअलि ठुलोबाबा र दादा, ठुलोमामुको पनि।
पारिवारिक, सामाजिक अनुभवका आधारमा लेख्दैछु- अहिले ‘आरआईपी’ र समवेदनाका लामा गथासा लेख्ने समाजलाई भोलिपल्टदेखि महाप्रस्थानमा निस्केको आत्मा सम्झिने फुर्सद हुनेछैन। फुर्सद त तिनै प्रतिभावान सन्तान मरेकी टुहुरी आमालाई हुनेछ । मलाई र म बाँचेको समाजलाई तिनै टुहुरी आमालाई क्षेमकुशल सोध्ने फुर्सदसम्म भइदिए लाख !